Indlela yokufumana abalandeli kwi-Instagram ngezi tricks | Iindaba zeGajethi
Ubafumana njani abalandeli kwi-Instagram
I-Instagram iye yaba yinethiwekhi yoluntu ngalo mzuzu. Ukukhula kwayo kwihlabathi liphela akunakuthintelwa, kwaye ibe yindawo efanelekileyo yokubonisa abantu abaninzi. Yindlela elungileyo yokunyusa ishishini lakho, iimveliso, iimveliso okanye ukhuthaze ikhondo lakho lomsebenzi. Izinketho zininzi kule nethiwekhi yoluntu, nangona kunjalo ukuze uzikhuthaze, into ebalulekileyo kukuba nabalandeli kwinethiwekhi yoluntu. Kwaye oku akusoloko kulula.
Ngethamsanqa, kukho ezininzi Iingcebiso kunye namacebo aluncedo kakhulu xa kufikwa ekufumaneni abalandeli kwi-Instagram. Ke ukuba uneprofayile kwinethiwekhi yoluntu kwaye ufuna ukufikelela kubasebenzisi abaninzi ngangokunokwenzeka, ungalandela ezi ngcebiso kwaye ke uqale ukukhula ngokulandela kuyo.
1 Chonga elona xesha lilungileyo lokufaka iifoto
2 Ukusetyenziswa kwee-hashtag kwiifoto
3 Gqabaza kwaye uthanda abanye abalandeli
4 Amacebo okucoca kunye nomgangatho wefoto
6 Thenga abalandeli?
Chonga elona xesha lilungileyo lokufaka iifoto
I-Instagram yindawo yenethiwekhi ekukho kuyo iincopho zomsebenzi ngamaxesha athile. Ezi ncopho zihlala zingamaxesha afanayo ukusuka kwelinye ilizwe ukuya kwelinye, kodwa kulungile ukwazi. Kuba ukuba sifaka iifoto mzuzu ngaphambi kokuba kwenzeke le ncopho yomsebenzi, siya kuba nethuba elikhulu lokuba ifoto izokutsala umdla wabasebenzisi abaninzi. Kwaye ukuba kukho abantu abathanda ifoto yethu, sinethuba lokuba baya kusilandela.
Ngokwesiqhelo kukho amaxesha amaninzi ngalo lonke usuku xa kukho umsebenzi omninzi kwinethiwekhi yoluntu. Ngo-5: 8 emva kwemini nango-XNUMX: XNUMX ngawona maxesha axakekileyo. Nangona kusenokubakho iyantlukwano ngokuxhomekeke kwilizwe ohlala kulo. Ngethamsanqa, sinezixhobo ezisivumela ukuba sazi ngokulula ukuba zeziphi iiyure ezilungileyo.
Singasebenzisa Iconosquare ukwazi ezona yure zibalaseleyo zokufaka ifoto kwi-Instagram. Ngale ndlela, siza kufumana umzuzu ngokuchanekileyo kwaye sinokwenza umdla ngakumbi, kuba ifoto iya kuthi ukuvezwa kwinani elikhulu labasebenzisi kwinethiwekhi yoluntu. Icebo elilula, kodwa lisebenza kakhulu.
Ke ngoko, kulungile ukuba siqalise iiposti zethu ngeli xesha. Kunokubakho amaxesha apho ungafumanekiyo ukulayisha okuthunyelweyo. Sisoloko isihobe Sebenzisa izixhobo ezisinceda ukucwangcisa iifoto kwi-Instagram. Ke sinokuthatha inxaxheba enkulu kwangaphambili kwaye ke kufuneka silayishe loo foto kwinethiwekhi yoluntu. Kukho izicelo ezinje ngeSchedugram eziluncedo kakhulu.
Ukusetyenziswa kwee-hashtag kwiifoto
IiHashtag ziyinxalenye ebalulekileyo ye-Instagram. Kuba ukusetyenziswa kwee-hashtag ezithile kwifoto kunokunceda ifoto ukuba ibonakale ngakumbi kubasebenzisi, ngakumbi ukuba zii-hashtag ezinokulandela okuninzi. Ukongeza, kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo uthungelwano lwentlalo luzise ithuba lokulandela i-hashtag. Ke oku kusinika amathuba amaninzi, kuba abantu abanomdla kwi-hashtag ethile, baya kuba nakho ukubona iimpapasho zethu.
Kubalulekile ukusebenzisa ezi hashtag kwizithuba esizilayishayo kwi-Instagram. Kodwa, kubalulekile ukuba singabaphathi gadalala, kuba oku kunika imvakalelo yokuba konke esikwenzayo kukugaxekile. Ke yonakalisa kakhulu umfanekiso wethu. Sebenzisa ii-hashtag ezimbalwa kodwa ezikhethwe kakuhle kwiifoto yindlela elungileyo yokufumana ukubonakala kunye nokutsala abalandeli kwiprofayili yakho.
Ngelixa singasebenzisa ii-hashtag ezinje nge #love okanye #photo, kufuneka sisebenzise ezihambelana nomfanekiso esiwufakayo okanye into esifuna ukuyithengisa. Singaba lishishini okanye umzobi, kwezi meko, sebenzisa ezo zihambelana neprofayili yakho. Ukungqinelana kubalulekile kule nkalo. Kwimali ekufuneka siyisebenzisile, ubuninzi bee-hashtag ezi-5 kwisithuba ngasinye.
Gqabaza kwaye uthanda abanye abalandeli
Ukuba sifuna umntu asilandele kwi-Instagram, singathatha inyathelo kwaye silandele iprofayile okanye umntu lowo. Thanda okanye ubeke izimvo kwiifoto zabo. Yindlela yokuba lo mntu azi ukuba sikhona, ukongeza ekuncedeni ukuvelisa unxibelelwano phakathi kwezi profayile. Ke siyazazisa kwaye baya kuqonda ukuba silapho kwaye baya kugcina betyelele iprofayile yethu kwinethiwekhi yoluntu. Kubonakala kungabalulekanga, kodwa kulungile ukuba kuyaziwa ukuba siyiakhawunti esebenzayo kwinethiwekhi yoluntu.
Ngokwesiqhelo isiphumo esaziwayo kwi-Instagram, ukuba xa uqala ukubeka izimvo kwiifoto zezinye iiprofayili kwaye unike ukuthanda, Uya kuqala ukubona ukuba iifoto zakho zifumana ukuthandwa ngakumbiUkongeza, kunokwenzeka ukuba inani labalandeli bakho liya kunyuka. Yinto elula kakhulu, kodwa iya kusebenza njengonyuselo. Ukudibana nabantu abanomdla kuthi, okanye abanokusinceda kwiiprojekthi ezithile. Ithuba ongafuni kuphoswa lilo.
Amacebo okucoca kunye nomgangatho wefoto
Ngokuqinisekileyo le yinto sele uyazi, kodwa kubalulekile ukuba umgangatho weefoto esiza kuzilayisha kwi-Instagram yeyona nto ibalaseleyo. Asibhekiseli kuphela kwisisombululo semifanekiso, ekwabalulekile, kodwa kukuba zenziwe iifoto zobungcali. Kuba ukuba sazisa into okanye sifuna ukubhengeza umsebenzi wethu, kubalulekile ukuba sibonise ngeyona ndlela ibalaseleyo. Kwaye kule nethiwekhi yentlalo, ibonisa iifoto ezintle.
Iifilitha zeefoto zithandwa kakhulu kwi-Instagram. Ukuba sithatha uhambo ngeeprofayili kwinethiwekhi yoluntu, uyabona ukuba uninzi lusebenzisa amacebo okucoca ulwelo afanayo. Iifilitha ezinjengeValencia zithandwa kakhulu kwaye zisetyenziswa ngabantu abaninzi abaneakhawunti kuyo. Unokuzama ukusebenzisa ezi zihluzo, njengoko kunokunceda ukwenza iifoto zakho zithandeke ngakumbi. Kulungile ukufumana iifayile ezimbalwa ezikunceda ukuba unike umfanekiso ohambelanayo.
Kwakhona, Singazisebenzisa izixhobo ezinjengeVSCO, eya kuthi isincede senze iifoto esizifaka kwi-Instagram zibengcono. Ngumhleli womfanekiso, oya kusivumela ukuba sihlele iifoto, ukongeza ukwaziswa kweefilitha kuzo. Kulula ukuyisebenzisa, kwaye yenye yeendlela ezilungileyo kwimarike.
Ngokusondeleyo kwindawo yangaphambili yiprofayili yethu. Kufuneka sibe neprofayili ehambelana noko sifuna ukufezekisa kwinethiwekhi yoluntu. Ke ngoko, kufuneka sibenomfanekiso weprofayili. Ukongeza, kwinkcazo ekule profayili, kubalulekile ukuba isicatshulwa sivakale kwaye sisincede sifezekise injongo yethu. Ke ukuba singumculi, makayitsho apho, ukuba siluphawu, makaphume. Kwakhona, kulungile ukusoloko ubeke iwebhusayithi okanye ibhlog ukuze bafumane umxholo ongaphezulu.
Umbono kukuba i-Instagram yindlela yabasebenzisi yokwazi. Ngokukodwa ukuba uthengisa into, uya kuba nakho ukubathumela kwiwebhusayithi yakho kamva. Ke kubalulekile ukuba neprofayili yobungcali ecacileyo kwaye imema abantu ukuba basilandele kule nethiwekhi yoluntu.
Kubalulekile ukuba Masisebenze kwaye sihlaziye iprofayili rhoqo. Nokuba ufaka iifoto okanye wabelana ngamabali. Kuba amabali kwinethiwekhi yokuncokola engomnye wemisebenzi yayo ethandwayo, ke musa ukuthandabuza ukuwasebenzisa, kuba asinceda ukuba sinxibelelane nabalandeli.
Isisombululo esineeprofayile ezininzi ezijolise kwi-Instagram kukuthengwa kwabalandeli. Le yeyona ndlela ikhawulezayo yokufumana inani elikhulu labalandeli ngokukhawuleza okukhulu. Ukuhlawula imali njenge-20 okanye i-25 euro unokufumana amawaka abalandeli kwinethiwekhi yoluntu. Yintoni enokuthi inyuse oku, nangona inezinto ezininzi ezinxaxhileyo kwiimeko ezininzi ezingaxoxiswanga, kwaye kubalulekile ukuba uzithathele ingqalelo.
Enye yeengxaki eziphambili kukuba aba balandeli abakho semgangathweni. Kwiimeko ezininzi ziinkangeleko ngaphandle kwesithombe kwaye zingenamsebenzi. Ke abayi kuncedisa nganto kuthi, kuba akukho xesha baya kuthanda ngalo iifoto zethu, kwaye akusayi kubakho kunxibelelana nazo. Yeyiphi na inkcitho yemali kuthi.
Kwakhona, Kulula kakhulu ukubona abalandeli bobuxoki kwiiakhawunti ze-Instagram. Kwanele ukubona ukuba kukho iiakhawunti ezinamakhulu amawaka abasebenzisi, kodwa ke inani lezinto ezithandwayo nezithandwayo ziphantsi ngokwenene. Oku kuhlala kungenxa yokuthengwa kwabalandeli bobuxoki, kananjalo kuba bengazi ukuba banxibelelana njani nabalandeli abanabo. Kubalulekile ngawo onke amaxesha ukwazi ukuba ubakhathalele njani, ukuze bathathe inxaxheba kwaye balandele oko sikufakayo.
Kungenxa yoko, kungcono ungabheneli kolu kuthengwa kwabalandeli kwi-Instagram. Ngokukodwa ukuba sifuna ukuhambisa umfanekiso olungileyo. Kuba ibonisa kwangoko xa kukho abasebenzisi abathenga abalandeli, kwaye ayisiyonto inika umfanekiso mhle kwabanye abantu. Ke inyani kukuba ayisibhatali. Ngala maqhinga, kuya kuba lula kakhulu kuthi ukuba sifumane abalandeli kwinethiwekhi yoluntu, ethandwa ngakumbi ngokuqhubekayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Izicelo » Ubafumana njani abalandeli kwi-Instagram
Apha ungabona bukhoma ukumiliselwa kwe-Huawei Mate 20 kunye ne-20 Pro
Ukukhanya kweStrip Strip kunye ne-Smart Outlet, iZisombululo zeKhaya eziSebenzayo ezivela eKoogeek